HOVAWART DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Hovawart Dog Macluumaadka iyo Sawirada
'Lucy hada waa 3 jir. Waa wehel layaableh. Lucy weli way ilaalinaysaa, laakiin sidoo kale waa mid bulsho iyo baashaal. '
Magacyada Kale ee Eeyaha
Hovawart waxay u egtahay xoogaa a Dahab dahab ah . Madaxa ayaa awood ku leh fool ballaaran, wareegsan. Qalfoofku wuxuu la egyahay dhererka masaska, oo leh joogsi qeexan. Sanku waa madow oo sanka sankiisu aad u horumarsan yahay. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Indhaha mugdiga ah illaa kuwa dhexdhexaadka ah ee bunni waa qaab muuqaal ah. Dhegaha saddex geesoodka leh ayaa si sare iyo ballaadhan loo kala saaray. Lugaha hore waa toosan yihiin. Cagaha waa wareegsan yihiin, is haysta oo xoog badan yihiin, oo si fiican u roon, suulasho adag. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Dharka dhaadheer ee dhaadheer, jaakad cufan ayaa xoogaa lulaya, oo fidsan. Waxaa ku yaal timo dheeri ah xabadka, caloosha, lugaha gadaashiisa, iyo dabada hoosteeda. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan madow iyo dahab, madow ama midab madow.
Hovawart waxay leedahay jilif xoog badan oo qoto dheer. Noocani wuxuu xasilloonaan doonaa gudaha guriga haddii uu helo jimicsi maalinle ah oo ku filan. Waa go'aan, adeec iyo kalgacal, gaar ahaan sayidkiisa. Daacad u ah reerka. Aad ugu fiican carruurta marka bulsheed wanaagsan , sifiican u jimicsi oo u arkaa aadanaha sida alfa. Iyagu waa kuwo aad u heelan oo leh dareen xoog leh oo dhul ah guud ahaanna kama warwareegi doonaan meel fog. Hovawart oo hadhay ciyaar iyo eey u eg da 'weyn, Hovawart waxaa loogu talagalay ajaanib laakiin waa eey qoys jecel. Dabeecad wanaagsan oo xitaa dabacsan. Eygan geesiyiinta ahi waa mid ilaalin kara, feejigan oo ilaalin fiican leh. Waxay ka ilaalin doontaa hantidaada kuwa ku soo xadgudbay leh xamaasad weyn. Markay maamuluhu muujiyo in martida la soo dhaweynayo, way aqbali doontaa isla markaaba. Hovawart wuxuu leeyahay san wanaagsan caraf udgoon. Waa mid caqli-gal ah oo lagu tababaran karo heer sare, iyadoo si dhakhso leh wax looga barto waxaad ka filayso. Natiijooyinka ugu wanaagsan ayaa lagu gaaraa iyada oo aad u iswaafaqsan , jacayl iyo tababar isku dheelitiran . Ragga aan la soo sheegin waxay noqon karaan kuwo aad u dhib badan in la maareeyo. Hovawart waa a nooc caan ah , taasi waxay u baahan tahay a mulkiile adag, khibrad leh. Haddii milkiilayaashu aysan halkaa joogin isgaadhsiin hogaankooda Hovawart waxaa laga yaabaa inuu dagaal kula galo eeyaha kale laakiin sifiican ayuu ula socdaa xayawaanka aan xayawaanka ahayn guriga dhexdiisa haddii si fiican loo dhexgalo. Haddii milkiilayaashu aysan ula dhaqmin Hovawarts-kooda hab in dareenkooda canine uu ku dhammaystirayo hoggaaminta habboon iyo sii deynta tamarta jirka iyo maskaxda, waxay ku keeni kartaa iyaga inay bilaabaan qaniinyo cabsi ah, ama ay noqdaan kuwo xishood badan. Hovawarts waxay ku habboon yihiin raadinta, samatabbixinta qulqulka, sida ilaalada iyo xaaladaha difaaca.
Dhererka: 23 - 28 inji (58 - 70 cm)
Miisaanka: 55 - 90 rodol (25 - 51 kg)
Tani waa nooc caafimaad leh. Si kastaba ha noqotee, tayroodh aan firfircooneyn ayaa ku baahsan khadadka Yurub. Hip dysplasia mararka qaarkood way dhacdaa.
Hovawarts laguma talinayo nolosha guriga. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Waxay doorbidayaan cimilo qabow waxayna ku seexan karaan banaanka. Waxay yihiin ilaaliyeyaal muuqda, gaar ahaan xeryaha, beeraha iyo guryaha waddanka.
Hovawart waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta socod , orod ama orod Intaad socodka ku jirto hubso in eey ciribta ka xigto ama ka dambeyso qofka hogaanka haya, marna hore, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Socodyada dhaadheer ee joogtada ah, socodka dheer, iyo fursadaha lagu ordo lagana ciyaaro hogaanka ayaa si weyn loogu raaxeysan doonaa waxayna ku ilaalin doontaa caafimaad. Si fudud ugu orod dhul adag.
Qiyaastii 10-14 sano.
Jaakada Hovawart way fududahay in la xajiyo. Cadayasho marmarka qaarkood ah iyo shanleyn, adoo taxaddar dheeraad ah ka sameeya meelaha laga yaabo in iskudhufku ka samaysmo, ayaa ah dhammaan baahiyaha noocan ah. Waa celcelis daadiya.
Hovawart wuxuu ka yimid Jarmalka. Waa nooc aad u duug ah oo shaqeynaya oo ka soo jeeda Newfoundland , Leonberger , iyo suurto gal ah Reer Hungary Kuvasz . Ujeeddada horumariyeyaasheeda waxay ahayd in dib loo abuuro eeyga ilaaliya hantida weyn ee qarniyadii dhexe. Hovawart waa ku dhif USA, laakiin caan ku ah Jarmalka. Eike von Repgow ayaa wax ka qoray 'Hofewart' sida eeyga ilaaliyaha guryaha ee Sachsenspiegel. Waxaa sidoo kale lagu muujiyey qoraallo ku saabsan burcad-badeeddii 1400-kii. Nooca ayaa ku dhowaaday inuu noqdo bakhtiyey 1200-yadii, sikastaba 1920-yadii nin soosaara magaca Kurt Konig ayaa ka shaqeeyay barnaamij dib loogu dhisayo taranka. Dedaalkiisu wuu guuleystey oo cawska waxaa aqoonsaday Naadiga Kennel-ka Jarmalka 1937. Qaar ka mid ah hibooyinka Hovawart waa ilaaliye, Schutzhund, goobid iyo samatabbixin iyo daba-gal.
'Iyadoo ay weheliso Lucy, Leo wuxuu hadda ka mid yahay qoyskeena. Markuu 9 bilood jiro aad buu u macaan yahay oo xasaasi yahay. Isagu mar hore waa ilaaliye weyn laakiin waa saaxiibtinimo marka uu arko inaan qof aqbalno. Leo wuxuu si fiican ula shaqeeyaa Lucy iyo sidoo kale 5 jirkeena bisad Qurux badan.
Leo the Hovawart sida eey yar oo jira 4 bilood
'Lucy hada waxay jirtaa 2.5 sano jir waxayna si qurux badan ku horumartay. Iyadu waa macaan tahay, cayaar badan tahayna, laakiin sidoo kale feejignaan iyo ilaalinba leh. Hovawarts waxay u baahan yihiin dulqaad badan iyo tababar socda . Si wanaagsan ayey uga jawaabaan amaan iyo abaalmarin oo ay la socdaan a hab deggan oo deggan . Lucy waa 26 'dherer iyo 74lbs ..'
Lucy Hovawart oo 8 bilood jir ah— 'Lucy waa kalgacal, go aansan, caqli badan, firfircoon oo ilaaliya. Sida inta badan Hovawarts waxay ku raaxeysataa ku ciyaarista barafka, socod dheer iyo u dhowaanshaha qoyska. Waxay ka jawaab celisaa tababarka waxayna ku fiicantahay isticmaalka isku dhafan xoojinta wanaagsan iyo farsamooyinka alfa adag (laakiin bukaanka) . '
Remy the Hovawart oo 11 jir ah— Remy hada waa 15 jir. Wuxuu lumiyay maqalkiisa intiisa badan, wuxuu luminayaa araggiisa (gaar ahaan isha bidix), miskahaaguna waa xunyihiin. Haddana wuxuu weli isku dayayaa inuu jaranjarooyinka kor iyo hoos u maro. Inbadan ayuu ku ciyi jiray dadka marka uu dhaafayo laakiin hada maqalkiisii ​​wuu lumay, 5 daqiiqo kadib ayuu ciiyaa. Isaguna wuu ciyoobaa marka qof guriga ka baxo hadda. Wuxuu laqabsadaa eeyo isaga kayar wuuna ka xishoodaa kuwa waaweyn. Wuxuu la jaanqaadaa bisadaha iyo xayawaannada kale ee yaryar. Wuxuu la macaamilaa carruurta da 'kasta oo uu yahay waana mid aad u daacad ah.
Gandhi de LaVillaRoy, sawir qadarin leh LaVillaRoy's Hovawart
Fenja von der Koboldshütt, xushmad sawir LaVillaRoy's Hovawart
Lancelo, xushmad sawir LaVillaRoy's Hovawart
Phonix von der Rabenleithe eeygii Hovawart
Phonix von der Rabenleithe the Hovawart qiyaastii 4 sano jir
Eeg tusaalooyin badan oo Hovawart ah
Hovawart Sawirada 1
sawirrada xawilaadda sonkorta
intee wey le egtahay bulldog
madow iyo midab yar yar dachshund
shih tzu qasan eeyo yaryar yorkie
tamaskan ey ey yey ah
Jarmalka adhijirka adag collie mix